Home Page COVID-19 – Iskuulada Mason City COVID-19 Xarunta
Farriin ka socota
Adiga oo ah Maamulaha Guud, Waxaan rabaa inaad ogaato inaan u joog nahay inaan taageerno oo aan daryeelayno isku xirnaanteena isgaarsiin joogto ah, kheyraadka, iyo rajo.
Sida aan uga sii gudubno dhacdadan adag, waan sii wadaynaa wada xiriirka – inaan ku ogeysiino waxaan ognahay, markaan ogaanno. Fadlan hoos guji si aad u hesho fariinteena maalinlaha ah.
Xiriir xirnow inta lagu gudajiro dhacdada COVID-19
Kheyraadka Muhiimka ah
Abriil 6, waxaan u gudbi doonnaa bey'ada barashada fog. Iyadoo shaqaalaheena ay isu diyaarinayaan isbadalkan, waxaad ka heli doontaa ilo badan oo loogu talagalay ardaygaaga.
Wax dheeri ah baro: Barashada fog
Goobta Barashada Ardayda
Baro waxbadan oo ku saabsan taageerrada caafimaadka maskaxda ee Mason City. Hel xeelado lagula qabsado inta lagu jiro waqtigan.
Soo ogow sida loo helo Chromebook haddii ilmahaagu lahayn qalab. Baro sida loo helo taageero usbuucyada soo socda.
Qof bulshada ka mid ah oo baahan yuusan gaajoon doonin. Soo ogow sida cuntada loo helo, iyo sida ay MCS u taageereyso qoysaskayaga oo wajahaya cunno yaraan.
Tani waa waqti aad muhiim ugu ah dad badan oo ka tirsan bulshadayada. Waxaan ognahay in Kombuyuutarkeennu CometITY uu had iyo jeer diyaar u yahay inuu caawiyo. Raadi habab lagu taageero qoysaska, ganacsiyada maxaliga ah (gaar ahaan kuwa martida loo yahay) iyo kuwa kale oo u baahan caawimaaddeena.
Eeg jawaabaha su'aalaha guud ee qoysaskayaga iyo bulshadayada.
Su'aalaha 'Corona Virus' ayaa looga Jawaabay
Laga soo bilaabo Isbitaalka Carruurta ee Cincinnati
Kheyraadka Khabiirada ah ee COVID-19 badan
Waanu kuu joognaa ...
Xitaa xilliyada adag, Waxaan ku kalsoonahay shaqaalaheena, ardayda iyo bulshada sababtoo ah degmadayada 3 Dhagaxyada Waaweyn. Waxaan ka fikirnaa ardaydeena iyo qoysaskeena waqtigaan oo waxaan dooneynaa inaad ogaato in shaqaalaheena dugsiga sare ay halkan kuugu yaalliin inta aan bilaabin safarkan cusub. Iyadoo tani ay tahay caqabad hor leh, shaqaalaha MHS waxay ku faani karaan "Joogitaanka Waqtiga" iyo ka jawaabida dhacdooyinkaan si ardayda oo dhan iyo qoysaskeena u koraan maalin kasta una sii wadaan inay fuliyaan Dhaqankeenna Comet-ka sida bartayaasha. "
Bobby DoddMHS Maamulaha
"Waa maxay faa'iidada ay leedahay in aan ka shaqeyneyno Dhaqankeenna Comet-ka iyo fahankeenna E + R = O ka hor dhacdadan CVEID-19. Waxaan dareemayaa inaan nasiib u yeesho ka jawaabida dhacdadan nasiib darrada ah ee ku dhacday beesheena Mason Comet. ”
Lauren GenteneMaamulaha Dugsiga Dhexe Mason
“Shaqaalaheenna, ardayda iyo bulshada waa inay bartaan la qabsiga iyo la qabsiga duulimaadka labadii toddobaad ee la soo dhaafay. Shaqaalaha MI ayaa leh “Lahaanshaha Waqtiga" waxayna ka shaqeynayaan inay xiriir la lahaadaan ardayda isla markaana ay qorsheeyaan casharro sii socon doona barashada. Waxaan seegnay inaan aragno ardaydeena maalin kasta laakiin waxaan rajeyneynaa inaan wada safarkan wada qaadanno. Caafimaad qab oo nabdoon! Xoog ku sii MI!”
Eric MesserMaamulaha Dhexe ee Mason
“Waxay ii ahayd farxad inaan arko muujinta naxariista iyo rajada laga helo barnaamijka 'My Comets'. Waxaan sii wadaynaa inaan ku sii noolaano ujeeddada dugsiga, 'Raadintu waxay ku bilaabmaysaa M.E.' adoo la xiriiraya xubnaha Comet Country si ay ula xiriiraan uguna ogeysiiyo inaan daryeelayno. Shaqaalaha Dugsiga Hoose ee Mason waxaa ka go'an inay taageeraan ardayda iyo qoysaska. ”
Javaris PowellMaamulaha Dugsiga Hoose ee Mason
"Waligeed muhiimad weyn kama saarna in la noolaado qaabkeenna Comet Kid iyo in la sameeyo jimicsi, naxariis, dabacsanaan, adkeysiga iyo niyad wanaaga. Qoysaskeena, shaqaalaha iyo ardayda ayaa dhamaan wadaagaya sheekooyin ku saabsan sida loo noolaado astaamahan oo runtii nolosha isu beddelaya xilligan. Waxaan aad ugu faraxsanahay caruurteena Comet ee ku nool Beesha Mason!!”
Melissa BlyXarunta Carruurnimada Hore
Daryeelka Ardayda iyo Qoysaska ...
Hadday tahay cunto, fayo qabka maskaxda ayaa taageera, tikniyoolajiyadda, ama ilaha waxbarasho - waxaan halkaan u joognaa bulshada Mason iyo magaalada deerfield.